Ndịàmà Jehova Nọ n’Eshia
MMADỤ OLE BI NA HA 49
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 4,464,374,770
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 771,272
Ozi Ọma E Ziri Otu Onye E Mee Ka Ndị Ọzọ Bata n’Ọgbakọ
Na Filipinz, otu nwanna aha ya bụ Jonathan gara ụlọ ọgwụ ka o nyere otu nwanna ahụ́ na-adịghị aka. Mgbe ọ nọ na-eche ka ọ hụ dọkịta, otu nwaanyị na-arụ ebe a na-anabata ndị mmadụ hụrụ otú o si jikere nke ọma ma jụọ ya ma ọ̀ bụ onye ịnshọransị. Aha nwaanyị a bụ Laila. Nwanna Jonathan gwara ya na ya bụ Onyeàmà Jehova, nakwa na ya bịara inyere nwanna ya ahụ́ na-adịghị aka. Ihe a Nwanna Jonathan kwuru tọrọ Laila ụtọ, ya agwa Jonathan na papa ya nwụrụ n’oge na-adịbeghị anya, nakwa na mgbe ọ dị ndụ, ọ na-agụ Ụlọ Nche mgbe niile. Nwanna Jonathan gwara ya ihe e dere na Jọn 5:​28, 29, ma nye ya traktị anyị aha ya bụ Olileanya Dị Aṅaa Dịịrị Ndị Anyị Hụrụ n’Anya Nwụrụ Anwụ?
Filipinz: Ebe Nwanna Jonathan na-ezi onye na-arụ ebe a na-anabata ndị mmadụ n’ụlọ ọgwụ ozi ọma
N’oge ndị ọzọ Nwanna Jonathan gara ụlọ ọgwụ ahụ, o wetaara Laila akwụkwọ anyị. O gosiri Laila nwanna nwaanyị ga-amụwara ya Baịbụl. Obere oge, ndị niile ha na Laila bi, ya bụ, ma di ya, ma nwanne ya nwaanyị, ma mama ya, malitekwara ịmụ Baịbụl.
Otu onye agbata obi Laila aha ya bụ Rose bịakwutere ya ma jụọ ya ihe mere ọtụtụ mmadụ ji abịa n’ụlọ ya. Laila gwara ya na ndị ahụ na-abịa n’ụlọ ya bụ Ndịàmà Jehova ya na ha na-amụ Baịbụl. Nke a mere ka Rose malitekwa ịmụ Baịbụl. Mgbe Rose gara ụlọ, ọ kọọrọ nwanne ya nwaanyị aha ya bụ Abigail ihe ndị ọ mụtara. Abigail chọkwara ịmatakwu banyere ihe ndị ahụ ọ nụrụ, ya ekwuo ka a mụwakwara ya Baịbụl. Mama ha malitekwara ịmụ Baịbụl.
E mere Laila baptizim ná mgbakọ ukwu e nwere n’oge na-adịbeghị anya. E meekwala mama ya baptizm. E mekwara onye agbata obi ya ahụ aha ya bụ Rose na Abigail nwanne ya baptizim n’afọ gara aga. Mama ha na-abịachikwa ọmụmụ ihe anya ugbu a. A na-amụkwara ụfọdụ ndị ezinụlọ Laila hà Baịbụl. Ihe ọma niile a mere n’ihi ozi ọma ahụ e ziri Laila n’ụlọ ọgwụ.
Iji Ekwentị na Kọmputa Enyere Ndị Ogbi Aka Ịnụ Ozi Ọma
Na Siri Lanka, a na-enwekwu ọtụtụ ndị ogbi a ga-ezi ozi ọma. N’afọ 2015, ndị ogbi Ndịàmà Jehova ji adres ha na Sri Lanka erughị iri asatọ. E dekwara aha ha na adres ha ná mpempe akwụkwọ dị iche iche. Kemgbe ahụ, e hiwela ọgbakọ mbụ na-eji Asụsụ Ndị ogbi nke Sri Lanka amụ ihe. E nweela ebe anyị na-ede aha ha na adres ha na kọmputa, nweekwa narị ndị ogbi anọ na iri abụọ aha ha na adres ha dị na ya. E nweekwala ihe na-enyere anyị aka ịchọta ebe ha bi. Ụmụnna eziela ọtụtụ n’ime ha ozi ọma. A gara hụ ụfọdụ n’ime ha ihu na ihu, sikwanụ n’ekwentị zigara ụfọdụ ozi. Ha jikwa kọmputa ma ọ bụ ekwentị mmadụ nwere ike iji hụ ibe ya, zie ụfọdụ ozi ọma. Otu di na nwunye bụ́ ndị ozi ala ọzọ kwuru, sị: “Ugbu a, anyị nwere ike ikenye ndị nkwusa bụ́ ndị ogbi ókèala ha ga na-ezi ozi ọma. N’oge gara aga, ndị ha na-aga ezi ozi ọma bụ naanị ndị ogbi ha ma.”
Ozi Ekele Si n’Aka Otu Onye Ọrụ Gọọmenti
Na Mongolia, ụmụnna anyị na-agba ezigbo mbọ na-edosa akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị ma n’oge a na-enwe ezigbo oyi. Otu ụbọchị, otu onye ọrụ gọọmenti bịara ebe anyị dosara akwụkwọ anyị were akwụkwọ. Mgbe ọ gụchara ya, o detaara anyị ozi ekele. N’ozi ekele ahụ, o kwuru, sị: “Abụ m onye Buda. Ma, agụọla m ọtụtụ akwụkwọ okpukpe ndị ọzọ n’ihi na e kwetara m na mmadụ ekwesịghị iso naanị otu ụzọ, kama o kwesịkwara ileba anya n’ụzọ ndị ọzọ. Mgbe m gụchara ụfọdụ akwụkwọ unu, m sị ka m dee akwụkwọ ozi a gwa unu otú obi dị m. Ahụrụ m na unu na-agba ezigbo mbọ ede ihe ndị ga-enyere ndị mmadụ aka. Otu n’ime ihe m mụtara n’akwụkwọ unu bụ na Baịbụl bụ akwụkwọ onye ọ bụla kwesịrị ịgụ. Ihe e dere na Baịbụl bụ eziokwu. Baịbụl na-agwa anyị otú anyị kwesịrị isi ebi ezigbo ndụ. M na-ekele ndị niile na-agbasi mbọ ike na-asụgharị akwụkwọ ndị a n’asụsụ Mọngolịan. M na-ekelekwa ndị niile na-ekesara ha ndị mmadụ ma mgbe ezigbo oyi na-atụ ma mgbe e nwere ezigbo okpomọkụ.”
Mọngolịa: Ebe ụmụnna anyị nọ na-ekwusa ozi ọma n’oge oyi
A Zara Ekpere Ya
E nwere otu onye ọsụ ụzọ bi na Họng Kọng aha ya bụ Brett. Otu ụbọchị ọ nọ n’ozi ọma, ọ hụrụ otu nwa okorobịa dị ihe dị ka afọ iri abụọ na asatọ ma nye ya traktị anyị bụ́ Gịnị Ga-eme Ka Unu Na-enwe Obi Ụtọ n’Ụlọ Unu? Mgbe ọ hụrụ traktị a, anya mmiri gbawara ya. O kwuru na a mụrụ ya n’ọgbakọ, mana na ya gbapụrụ n’ụlọ mgbe ya dị afọ iri na isii. O kwukwara na ya biri n’okporo ámá ruo afọ ise, ịṅụọgwụ ike rikwara ya ahụ́. Ma otu ụbọchị, ndị òtù ọrụ ebere hụrụ ya ma nyere ya aka.
Nwa okorobịa ahụ kwuru na n’ụtụtụ ahụ, na ya bu ụzọ kpee ekpere tupu ya ahụ nwanna nwoke ahụ. Ọ rịọrọ Chineke, sị: “Ọ bụrụ na okpukpe ndị mụrụ m bụ ezigbo okpukpe, biko, gosi m taa, ihe m ga-eji amata.” Ọ ghọtara na Chineke zara ekpere ya. Ya na nwanna ahụ gara n’ebe dị nso a na-aṅụ kọfị ma leba anya na broshọ bụ́ Lọghachikwute Jehova. Nwa okorobịa ahụ nyere ya adres ya n’ihi na ọ ga-alaghachị Frans ná mgbede ụbọchị ahụ, nwanna ahụ enyekwa ya nke ya. Nwa okorobịa ahụ mechara detara ya akwụkwọ ozi. N’akwụkwọ ozi ahụ, o dere, sị: “Ezigbo nwanna m, Jehova azala ekpere m. M ga-aga ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze dị m nso na Sọnde.” Mgbe o ruru Frans, ọ hụrụ Ndịàmà Jehova, ya na ha amalite ịmụ Baịbụl, ya amalitekwa ịga ọmụmụ ihe.